Bafatii Garagarsichaa, kaasuu fi sirna Gargaarsaa LibreOffice too'achu siif hayyama.
Fayyadama ammaatiif fuula guumaa kan Gargaarsa LibreOffice bana. Fuulawwan Gargaarsa keessa marsuu nidandeessa, akkasuumas jechoota kasaa yk barruu kamiiyyu barbaaduu nidandeessa.
Hamma cuqaasa ittaanuuti, qajeelchawwan garagaarsaa babalkdhataa qaree hantuutteetti dandeessisa.
Odeeffaannoo saganta waliigalaa kuniis, lakkoofsa fooyya'aa fi mirga abbummaa agarsiissa.
Fooyya'oota fi Ijaari Lakkoofsaa
Qajeelfama babal'ate banaa fi dhaamaa tti jijijjiiruu
Title is: Gargaarsa